Hoggaamiyeyaasha Galbeedka Afrika Oo Ku Yaboohay $1bn Oo Lagula Dagaalamo Kooxaha Hubaysan – HCTV
0	September 15, 2019 2:17 pm
Ouagadougou, (HCTV) – Hogaamiyeyaasha Galbeedka Afrika ayaa shir ay ku yeesheen Burkina Faso waxa ay ku dhawaaqeen inay ku balanqaadeen lacag gaadhaysa $1bn oo lagula dagaalamo kooxaha nabadgalyo darada ka wada gobolka Sahel.
Balanqaadkan oo qorshihiisu yahay in in la maalgeliyo 2020 illaa 2024, ayaa lagu dhawaaqay Sabtidii dhammaadka Shirweynaha Dhaqaalaha Dhaqaalaha ee Waddamada Galbeedka Afrika (ECOWAS) ee Ouagadougou, halkaas oo xubnaha ururku ay ku soo biireen Mauritania iyo Chad.
Madaxweynaha ECOWAS wuxuu go’aansaday inuu abaabulo “ilaha dhaqaale ee illaa hal bilyan oo doollar loogu talagalay la dagaallanka argagixisannimada”, ayuu yiri madaxweynaha Niger Mahamadou Issoufou.
Lacagta, oo lagu bixiyay sanduuq guud, waxay gacan ka geysan doontaa xoojinta hawlgallada millatari ee waddammada ku lugta leh iyo kuwa hawlgallada millatari ee wadaagga ah ee gobolka ka socda. Faahfaahinta buuxda ee qorshaha waxaa loo soo bandhigi doonaa shirweynaha ECOWAS ee soosocda bisha December.
Dagaalyahano xidhiidh la leh al-Qaacida iyo Dawladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo kooxda Levant (ISIL ama ISIS) kooxaha hubaysan ayaa xoojiyay raadkooda guud ahaan gobolka oday-galka ah ee Sahel sannadihii ugu dambeeyay, iyagoo ka dhigaya dhul ballaadhan dhul aan la xakamayn karin isla markaana kicinaya rabshadaha qowmiyadeed ee maxalliga ah, gaar ahaan Mali iyo Burkina Faso.
Iyada oo ay taageerayaan Faransiiska, ciidan millatari oo dhawr ah oo ka socda gobolka Sahel ayaa bilaabay hawlgallada 2017, iyagoo ka riixaya ciidamada Mali, Niger, Chad, Burkina Faso iyo Mauritania si ay dib ugu celiyaan kooxaha hubaysan.
Laakiin dhaqaale la’aan, tababar iyo qalab, ayaa xaddiday waxqabadka ciidamada isku dhafka ah ee G5 Sahel iyo tiradooda – xilligan, ciidamada tiradooda waa 4,000 oo ciidan, markii 5,000 markii hore la qorsheeyay.
‘Dhibaatooyin bina-aadamnimo oo aan hore loo arag’
Bilowga shir madaxeedka Ouagadougou, madaxweynaha guddiga ECOWAS, Jean-Claude Brou, wuxuu farta ku fiiqay tirada dadka, dhaqaalaha iyo siyaasadeed ee rabshadaha isaga oo ugu yeeray Qaramada Midoobay inay xoojiso howgalkeeda nabad ilaalinta ee MINUSMA, oo ay horay u jirtay. saldhigeedu yahay dalka Maali ilaa iyo sanadkii 2013.
Wuxuu yidhi, “2,200 weerar afartii sano ee la soo dhaafay, 11,500 ku dhinteen, kumanaan dhaawac ah … malaayiin barokacay iyo dhaqdhaqaaq dhaqaale ayaa si weyn u saameeyay.”
Madaxweynaha Burkino Faso Roch Marc Christian Kabore wuxuu ku dooday “hanjabaadu inay dhaafayso xuduudaha. Majiro wadan amaan ah” iyo in “sii kordhashada rabshadaha ay keentay qalalaase bini’aadanimo oo aan hore loo arag” ee Sahel.
Dhanka kale, Madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara wuxuu yiri “MINUSMA iyo G5 Sahel kuma filna. Waa inaan helnaa waddo ballaaran oo wax ku ool ah oo isuduwid ah” halka Issoufou Niger uu intaas ku daray “Beesha Caalamku ma jeedsan karto indho la’aan waa inay la wareegaan mas’uuliyadeeda” .
ECOWAS waxay sidoo kale weydiisan doontaa Baanka Adduunka iyo IMF inay tixgaliyaan qarashka ku baxa amniga sidii “maalgashi” isla markaana ay taageero kahelaan deeq bixiyayaasha reer galbeedka iyo carabta, ayuu yidhi.
Bishii Luulyo, Qaramada Midoobay waxay sheegtay in weeraradu si xawli ah ugu faafinayeen Galbeedka Afrika taas oo ah in gobolku tixgeliyo sidii loo xoojin lahaa jawaabtiisa wixii ka dambeeya dadaallada milatari ee hadda jira.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa horaantii bishaan yiri waxaan rumeysan nahay inaanan ku guuleysanaynin dagaalka ka dhanka ah argagixisada ee Sahel loona baahanyahay in howlgalka la xoojiyo.